Zobugqi nezintle: 5 iifutshane zeKrisimesi ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Zomlingo kwaye zintle: Iifutshane zeKrisimesi ezi-5
Ixesha leKrisimesi liza neentsuku zemilingo nezikhethekileyo, ebantwaneni inkohliso yokufumana izipho kunye nabantu abadala ngawo lawo maxesha okukhumbula kunye nokudibana kosapho. Senze ukhetho lwe Amabali amahle kakhulu ekrisimesi.
Amabali amafutshane eKrisimesi
1 1- Igosa likaSanta uNicholas okanye uSanta Claus
2 2.- Amadoda amancinci ali-13 eKrisimesi
3 3.- Poinsettia intyatyambo
4 4. - Ilivo lesigcawu seKrisimesi
5 5. - Igqala likaRudolph, i-reindeer
1- Igosa likaSanta uNicholas okanye uSanta Claus
UNicolas waseBari Wazalelwa kwinkulungwane ye-XNUMX kwinto ngoku eyaziwa ngokuba yiTurkey, phakathi kobunewunewu kunye nobutyebi. Ukususela ebuntwaneni bakhe, uNicolás wayegqamile ngokuba nesisa kunye nobubele kwabo babeswele kakhulu.
Esemncinane, lo mfana waphulukana nabazali bakhe waza waba yindlalifa enkulu. Kwaye xa wayeneminyaka eli-19 ubudala, uNicolás wagqiba kwelokuba anike bonke ubutyebi bakhe kumahlwempu kwaye washiya umalume wakhe ukuba azinikele kubufundisi.
Kamva yaba Umxhasi oNgcwele waBantwana noLwandle. Ngobunye ubusuku uSanta uNicholas wafika kwikhaya elihlwempuzekileyo kwaye waphosa izipaji zegolide kwintombazana nganye kolo sapho, ezi ziqendu zahamba rhoqo kwaye yonke imihla wayesaziwa ngakumbi.
Rhoqo nge-6 kaDisemba, sisikhumbuzo sonyaka ukufa YaseSan Nicolás, iintsapho zilungiselela imithendeleko ngembeko yenkumbulo yeSan Nicolás. Ngenxa yokuhlonipha indalo yakho enkulu, ikwaqwalaselwa njengethamsanqa lokutshata kwangolo suku lunye.
Ukuqala ngenkulungwane ye-XNUMX, isiko lamaKatolika likaSanta uNicholas lakhula eYurophu kwaye ngenkulungwane ye-XNUMX eli siko lafika eUnited States, apho kulisiko ukushiya iicookies kunye neglasi yobisi eSanta Claus.
2.- Amadoda amancinci ali-13 eKrisimesi
Imbali ithi kwakudala kudala yayihlala e-Iceland abantu abancinci ababizwa ujlasveinarnir, obethanda ukuqhula abantwana, ade abangele uloyiko.
IJólasveinarnir yayingabantakwabo abali-13, oonyana be-ogre, kwaye nangona nganye yayihlukile, babenomdla ofanayo wokufihla phakathi kwamatye nekhephu. Abantu bendawo bacatshukiswa kukuziphatha kwamadoda amancinci ebantwaneni, kwaye bacela uncedo kwinkosi.
Umlawuli ophakamileyo wale ndawo wagqiba ukohlwaya la madoda mncinci kwaye wabaxelela ukuba, ukuba abafuni ukugxothwa e-Iceland, kufuneka banike umntwana ngamnye isipho, usuku olunye lonyaka, ukwenzela ukubuyekeza bonke ububi ababenzileyo.
Yiloo ndlela ke abantu abancinci bavumayo ukunika izipho kwiintsuku ngaphambi kwe-25 kaDisemba, aba bafana bagqiba kwelokuba bazakuhambisa kuphela izipho kubantwana ebebelungile, kunye nabo bangakhange babakhabe
3.- Poinsettia intyatyambo
Amanye amabali eKrisimesi Mfutshane uvela eMexico Kwaye uxela kwiminyaka embalwa edlulileyo, kwidolophana encinci, abahlali bayo babedla ngokuhlangana ecaweni minyaka le kwaye banike izipho ku umntwana uYesu ekuzalweni kwakhe.
UPablo wayengumfana osithanda kakhulu esi siko, minyaka le wayejonga indlela abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo nezipho ezintle. Njengokuba ixesha lihamba, uPablo waqokelela usizi olukhulu, kuba wayehlwempuzekile kwaye engenanto anokuphisa ngayo.
Ngesinye isihlandlo uPablo wazifihla ekoneni yecawa, ukuthintela omnye ukuba angaboni ukuba wayephethe isipho, waqala ukukhala, kwaye ngequbuliso kwiinyembezi zakhe ezaziwile, intyatyambo entle enamagqabi abomvu yaqala ukuhluma.
Umfana wayeyiqonda loo nto intyatyambo yayisisipho esivela kuthixoUkuze ayinike usana olunguYesu, uPablo wonwabile wahamba wayokubeka intyatyambo nezinye izipho kwaye akaxelelanga mntu ngokwenzekileyo.
Abanye abantu ababesecaweni bothuswa kukubona ubuhle besityalo, kwaye ukusukela ngaloo nyaka isithethe saqala ngokuzisa intyatyambo enjalo ekuzalweni kukaYesu minyaka le.
4. - Ilivo lesigcawu seKrisimesi
Kwidolophu efihliweyo phakathi kweentaba ezinekhephu zaseJamani, abemi bayo minyaka le babecoca kwaye behombisa izindlu zabo ukwamkela ukufika kwabafazi ngamandla amnandi. Amatheko eKrisimesi.
Kwenye yezindlu elalini kwakuhlala usapho lwesigcawu, kwaye ngelixa abantu belungisa indlu yabo ukulungiselela imibhiyozo, izigcawu zihamba zisuka kwindawo enye ziye kwenye ukuze zingafunyanwa.
Ngobusuku obunye kwafika usapho lwaya kulala, izigcawu zaphuma kwindawo ezazizimele kuyo zaza zathandwa bubuhle bomthi weKrisimesi, zakhwela emthini, zaqala ukudlala zashiya iikhokho zazo kuwo.
USanta Claus watyelela elo khaya ngoSuku lweKrisimesi kwaye wajonga izigcawu zidlala emthini, awazifumana zihlekisa kakhulu, kodwa wayesazi ukuba akanakubashiya apho, kuba usapho ukubona kwabo umthi wabo uzele zii-cobwebs kungabenza buhlungu kakhulu.
Ke uSanta Claus ubuze isigcawu ukuba bafuna ukuhlala kulamthi, baphendula bathi ewe, wabenza imihombiso, Kwaye ngokweli bali imihombiso izalwe zizigcawu.
5. - Igqala likaRudolph, i-reindeer
Iimbali zeKrisimesi ezimfutshane uRudolph
URudolph okanye uRodolfo wayeyinyamakazi ezalwa inempumlo enkulu ebomvu ecwebezelayo, enye ingcuka yayimhlekisa ngalo lonke ixesha, yiyo loo nto ixesha elininzi wayehamba nje el mundo.
URudolph wayekhathazekile kwaye enxunguphele, ngenkxaso yabazali bakhe ngenye imini ixhama lenza isigqibo sokushiya ilali yakhe kwaye liqale ubomi obutsha, kude nabo bonke abo babemhlazisa.
Ngobusuku beKrisimesi, uSanta Claus wayelungiselela ukuphuma, wayephethe i-reindeer yakhe eyi-8 elungele ukuhamba ngesileyi ukuze azise izipho ebantwaneni, ngequbuliso umhlaba wawugutyungelwe yinkungu enkulu engamvumeli ukuba abone indlela .
U-Santa Claus owayekhathazekile wayengazi ukuba uza kuba nakho na ukubhabha i-sleigh. Mgama INgcwele uNicholas yabona ukukhanya okubomvu okuqaqambileyo kwaye wamlandela, wayengazi ukuba yayingantoni na, wathi akufika kufutshane waqonda ukuba nguRudolph ingcongolo.
Wamangaliswa nguSanta Claus, wacela uRudolph ukuba ahambe naye kwisileyi yakhe. I-reindeer yavuya kakhulu, yasamkela isicelo. Kwaye ukusukela ngalaa mzuzu Ixhama elineempumlo zakhe likhokela uSanta ngamakhaya abantwana kwihlabathi liphela.
Amabali amafutshane eKrisimesi ngamabali amnandi ukubalisela abantwana, ahambisa ulwazi, kunye neenqobo ezintle kwaye uninzi lwazo luchaza imvelaphi yezithethe zale mihla ithandwayo.